ko htike's prosaic collection: ဂမ်ဘာရီလာပြီ
ကျွန်တော်ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးလေး တစ်ခုကို မှတ်မိသေးတယ်၊ ရာဇာလီ လာတမ်း ကစားနေတာ...
ထောင်ထဲမှာ နေတုန်း အပြင်မှာ ဘာတွေ ထူးမလဲ စောင့်ပြီးနားထောင်နေတာတဲ့၊ အလုပ်မှ မရှိဘဲ။
... ရာဇာလီ လာမယ် .. ရာဇာလီလာပြီ၊ ရာဇာလီ ပြန်ပြီ
... ရာဇာလိ ပြန်လာမယ် ... ရာဇာလီ ရောက်နေပြီ၊ ရာဇာလီ ပြန်သွားပြီနဲ့ ...
ပြီးခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးကို သတိရနေတာပါ။
အခု ဂမ်ဘာရီ လာမယ်၊ ဂမ်ဘာရီ လာပြီ၊ ဂမ်ဘာရီ ပြန်ပြီ
ဂမ်ဘာရီ ပြန်လာမယ်၊ ................................
ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့မယ်၊ ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့တယ်၊ ဒေါ်စုနဲ့ ပြန်တွေ့မယ်..
ကျော်ဆန်းက လိမ်မယ်၊ ကျော်ဆန်းက လိမ်တယ်၊ ကျော်ဆန်းက လိမ်ဦးမယ် ... ဒါပါပဲလား ..
ကဲ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်မလဲ၊ သမိုင်းကို အမှတ်တရထားရတာထက်၊ သင်ခန်းစား ယူရမယ် ဆိုတာကို မေ့များနေမိသလားလို့ ကိုယ့်ဘာသာ တွေးနေမိသေးတယ်၊
UN က အခုလောက်အထိ စိတ်ဝင်စားနေတာ၊ စိတ်ဝင်စားခဲ့တာ၊.......
နိုင်ငံတကာက အခုလောက် အထိ အကူအညီပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတာ၊ အကူအညီ ပေးနေတာ....
အဲဒါတွေက နိုင်ငံတကာက ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်နေတဲ့ လူတွေ၊ နိုင်ငံရေး လေ့လာသူတွေ၊ နိုင်ငံရေး နိုးကြားသူတွေ ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ (အဲ .. အရှက်မရှိ နိုင်ငံရေး အရေခြုံတွေ၊ လုပ်စားနေတဲ့ လူတွေ၊ သံဃာတွေ အသတ်ခံရ၊ ဘာသာ သာသနာကို စော်ကားတာခံရပြီးတာတောင်မှ ကြောက်နေပြီး နောက်ကွယ်ကတောင်support မလုပ်ရဲတဲ့လူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံအရေး ငါ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ မွေးပြီး ဘယ်နိုင်ငံသားမှန်းမသိနိုင်တော့တဲ့ လူတွေကိုတော့ ထည့်တွက်မနေတော့ပါဘူး။)
တိုင်းပြည်ထဲက တကယ် အလုပ် လုပ်နေသူတွေ၊ ဘ၀ စတေးသွားသူတွေ၊ ရဲရဲတောက် သံဃာတွေကြောင့် ဒီလို ဖြစ်လာရတာ။
ဒီတော့ အခုအချိန်မှာ ဂမ်ဘာရီ လာရင် ဘာတွေ တောင်းဆိုသင့်တယ်၊ UN က ဘယ်လို အက်ရှင်ယူရင် ကောင်းမယ်၊ UN တပ်တွေ ၀င်လာအောင် တောင်းဆိုရမယ်၊ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေမှာ မြန်မာအကြောင်း မပါတော့ဘူး၊ မြန်မာကို မေ့နေတော့မယ်၊ သတင်းတွေမှာပါအောင် လုပ်မယ်၊ ဂမ်ဘာရီ လာမယ်၊ လာပြီ၊ ပြန်ပြီ ပြောနေတာတွေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နှီးနှောနေမယ်အစား ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ထဲမှာ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ တော်လှန်ရေးတွေ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က ဖြစ်လာအောင်၊ အရှိန်ရလာအောင် ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲဆိုတာကို focous လုပ် ဆွေးနွေး လုပ်ကိုင်ကြရင် ပိုမကောင်းဘူးလား။
UN၊ ဂမ်ဘာရီနဲ့ နိုင်ငံတကာကနေ ကျွန်တော်တို့ အခုလို လုပ်မယ့် လှုပ်ရှားမှု၊ တော်လှန်ရေးတွေနောက်ကို သူတို့ကို ပြန်လိုက်ခိုင်းတာသာလျှင် မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေမိပါကြောင်း။
Posted by ကိုထိုက် at 11:21
ur absolutely right ko htike.
8 November 2007 at 12:21
I am all for action...... just let us know what is next?
Hello .. Ko Htike
you still expected UN , I told in your cbox and I told everybody in my burmese Bro and Sis. They don't care any human being not even UN .
We are done in peace already been 20 years now. This is enough to waiting , So ... please... please...
ALL BRO and SIS...
Lets start fight back for OUR NATION and OUR LAND.
Our blood are belong to our country. Now, this country need our blood. So, dont think too much and stop talking,
Make in desicion and urgent meeting for fight back and kill to all. Thats what I want to be,
Would you be organize to all ?
and we should need meeting and basic training for arms with UNITED together . This is no time to chatting each other and stop look in what come in next (UN).
In Burma almost 40,000 SPDC soldiers, Our people are more than this. You know what I means.
So, PLEASE..... Lets do it now.
We are living in the world , everybody should be leave in one day from this world nobody know which day, most of them are forget about it, even me sometime.
Killing people are very very guilty in our Islam religion but no choice to be now. If ALLAH give meahell, I will smile for kill these evil Groups.
May Allah Bless All Burmese Bro and Sis.
8 November 2007 at 12:57
U r 101% right Ko Htike. I really respect u for this.
ဘယ်သူ့ မှအားကိုးမနေနဲ့ ... ကိုယ့်အာကို ကိုးပြီး ရတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ တွန်းလှန်ဖို့ သာ ပြင်ဆင်တော့..
သူများအားကို နေရင် တသက်မကဘူး..နောက် ဆယ်သက် အာမခံရဲ တယ်... လူလုံးလှမှာမပာုတ်ဘူး...
ကျုပ်တို့ တတွေ.. မေ့ချင်ယောင်ဆောင်လို့ မရဘူး တခေတ်မှာတယောက်သာရှိမဲ့ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်စုလည်း အသက်ကြီးနေပြီ..လုပ်သင့်တာကို..ကိုယ့်အားကိုကိုးပြီး လုပ်ဖို့ ဖြန့် ဝေပါစို့ 
Burmese people have lost hopes, even UN couldn't help us.
"Burmese people have lost hopes, even UN couldn't help us."
I don't think we are hopeless, we never lost our hope, we might get helpless, but never hopeless.
you could see our courages, even SPDC destroy the whole county and people, but we did fight in last sept. that's why we are not hopeless, we will win.
မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ မြန်မာနိုင်ငံကို နောက်တခေါက် လာဖို့မလိုတော့ဘူး။ လာလည်း မလာစေချင်တော့ဘူး။ အာရုဏ်နောက်တယ်။ ဂမ်ဘာရီလည်း အာလာကားပဲ။ UN လည်းအာလားကားပဲ။ ရတယ် သင်တို့အကူအညီမလိုချင်ဘူး။ ဟုတ်ပြီး တခုတော့ရှိတယ် မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက် ကိုယ့်ဟာကို လုပ်ယူမယ်။ လုပ်ယူတဲ့နေရာမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်မယ်။ နောက်မှ ငါတို့ကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူ၊ အကြမ်းဖက်သမား၊ အစွန်းရောက်သမားလို့ ခင်ဗျားတို့ ပါးစပ်ကနေ ဟဖို့မကြိုးစားနဲ့။ ခင်ဗျားတို့သိထားဖို့က နအဖစစ်အစိုးရက ပြည်သူတွေ၊ သံဃာတွေ၊ ကျောင်းသားတွေကို သေနတ်နဲ့သတ်ဖြတ်နေတယ်။ ဒါကို ခင်ဗျားတို့ အေးအေး၊ အေးအေး လုပ်နေတယ်။ မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပေါ်လာမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့နဲ့အများဆိုင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာ အားမရလို့ နောက်ဆိုရင် အကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်မယ်၊ သတ်ဖြတ်မှုတွေပေါ်မယ်၊ သွေးချောင်းစီးမှုတွေဖြစ်လာမယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင် မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်ချင်ပဲ အကြမ်းဖက်နေရတဲ့လူတွေကို အကြမ်းဖက်သမားလို့ ခေါ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာရချင်းက ခင်ဗျားတို့ UN အသုံးမကျလို့ပဲ ဒါပဲပြောချင်တယ်။
9 November 2007 at 07:09
In Myingyan,at the last month military orders to villager who live in Pyar.They want to antiboycott.But they don't said this real fact.They said to villagers to boycott with monks.And leader in this village also said the same to your villagers.Villagers don't known this fact so they did this movement.
They known this that is no real when they reached at this place.At this time they angry their leader as he don't said real facts.Villagers wanted real boycott.
Then when they reached their village,they attacked their leader with knifes.
So this leader went to OPT with immergency.
I'd like to see more real progress, for example release political prisoners, stop arrests on monks and pro-democracy activists. Who can blame on holding negative view on initial steps towards dialogue: our hopes have been destroyed again and again in the past. But this time, you have to accept situations have changed. It is very important for us to unite and keep pressure on SPDC in non-violent way and make sure UN delivers what it promised.
9 November 2007 at 23:30
We need our strong commitment in turn of personally or group to see changing Burma. There is no personal offence for every one. but just saying n supporting this n that, I think that it will not getting better. Cuz they are strong n we, all are outside the country.
Like Thakin Soe who's communist party leader said that once if you want to destroy or damage the party you can not be outside , but must be an inside member of party who can really act and create to do.
What I mean is we need people who are staying inside and they have to counter act like what the army or the government do if they really want to. For example, they try to arrest the relative of pro-democracy movement leader. When people are bare hand , they are using fire arms.We must do it an eye for eye. So we can do form the group and the same thing they did to us or we can give disturb or kidnap their family members. Believed once they know or aware of their danger of family members they will start thinking of what's the consequence of what they did to the people. Please don't expect so much from outside world.
We need someone or the people have to initiate and commitment start to do so, otherwise we will be suffer another our grandchildren generation or may be more....
10 November 2007 at 15:16
玩弄av美女泳裝美女寫真av美女真人美女辣妹鋼管脫衣秀手槍美女賞圖波霸美女小遊戲白虎美女圖庫一夜情貼圖一夜情聊天Google,網上論壇東東成人論壇WO,WO,論壇18禁地論壇Mr.愛愛聊論壇玫瑰公爵成人論壇荳蔻情色論壇exBT成人論壇亞洲情色論壇辣辣情色論壇激突綜合論壇gogobox論壇伊莉論壇討論區不夜城情色論壇日本情色論壇視訊辣妹0509免費 視訊聊天秀洪爺視訊網性感妹妹等你喔視訊聊天室入口激情挑逗聊天室視訊聊天頻道視訊聊天都會男女視訊聊天免費觀看視訊辣妹脫衣秀限制級a片情色電影院美女短片免費試看限制級影片自拍情色影片下載18禁成人影音線上視訊聊天網辣妹視訊聊天網限制級電影即時通視訊大奶美女視訊本土辣妹視訊即時通成人視訊成人視訊交友聊天視訊錄影熟女視訊聊天免費辣妹視訊聊天網網友情聊天室上班族偷情聊天室已婚上班族聊天室080心悸動聊天室美眉影音視訊聊天室夜未眠成人影城☆♀ 18成人 ☆♀免費下載成人短片免費真人視訊辣妹一對多視訊聊天即時視訊聊天網路視訊聊天臺灣18歲成人小弟弟成人娛樂小潘潘成人無碼片夜激情成人聊天室免費視訊美女網成人愛情交易所線上交友網百分百成人圖日本av女優影片無碼av女優女優寫真av女優介紹sex女優王國女優星球女優探索網歐美女優Ａ片免費a片網站女優網免費情色電影無碼女優168影音視訊聊天室免費成人圖片區台灣女優成人情色影音網鄰家女優☆♀ 一夜激情聊天室 ☆♀無碼日本女優短片試看免費色咪咪影片網a片女優線上aaa片免費av女優無碼日本女優美女寫真免費欣賞小魔女自拍天堂人氣女優☆♀ 潮吹影片 ☆♀av女優神藤美香0401影音視訊聊天室日本av女優免費影片區網路視訊聊天室免費情色電影分享區av女優排行情色 聊天天堂情色網撿來的av女優台灣情色論壇情色視訊免費線上觀看a片免費aaa片俱樂部分享自拍a片女優做愛限制級試看a片情色a片美女a片美國a片歐美 a片線上a片免費看免費線上看a片台灣a片台灣a片王